Socolait: 40 taona ho an’ny mpanjifa | NewsMada
Socolait: 40 taona ho an’ny mpanjifa
Anisan’ny tena amantarana ny orinasa Socolait ny famokarana ronono mandry mamy (LCS) anaty boaty. Orinasa malagasy nanome fahafaham-po ny mpanjifa tato anatin’ny 40 taona, ary vonona hanome ny tolotra tsara indrindra indray ho an’ny 40 taona manaraka, araka ny fiteniny. Anisan’ny nanamarihana izany ny andron’ny asabotsy 8 septambra teo teny Besarety, nahitana hetsika maro samihafa. Fotoana niarahana nifaly mivantana tamin’ny mpanjifa, niaraha-nihinana kafe na dite mafana nasiana ronono mandry Socolait, nosotroina niaraka tamin’ny karazana mofo tena malagasy marobe, toy ny mofobaolina, mofogasy, ramanonaka, menakely, sns.
Nandritra izay 40 taona izay, mahatsapa ny mpanjifa rehetra fa miavaka ity vokatra vita malagasy ity, na eo aza ireo vokatra avy any ivelany. Azo tsorina fa tsy manan-tsahala ny tsirony, satria marihitra tsara, nefa mora sady zakan’ny fahefa-mividin’ny isan-tokantrano tsy ankanavaka ny vidiny. Amin’izao taon-jobily izao, mbola nampidinina ho 2 900 Ar indray ny vidin’ny iray boaty milanja 390 gr, ary 7 500 Ar ny boaty milanja iray kilao.
Marihina fa any Antsirabe ny toerana amokarana ny ronono mandry Socolait (LCS). Vokatra tena malagasy iaraha-miasa amin’ny tantsaha miompy ombivavy beronono, maherin’ny 2 300 sy mpanangom-bokatra mihoatra ny 100.